Ratu Boko, Ratu Boko मंदिर - जावा
ठेगाना: बोकोहोजो, प्रम्बनन, स्लेमन रेगेसी, योग्याकार्ता, पूर्वी जावा, इन्डोनेशिया
खुल्ला समय: दैनिक 6:00 देखि 17:00 सम्म
भ्रमणको लागत: वयस्क टिकट (10 बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरु सहित) - $ 25, बच्चाहरु (3 देखि 10 बर्ष सम्म) - $ 15
जोगजाकार्ताको क्षेत्रमा हिंड्नको लागि एक धेरै रोचक ठाउँ पैलेस रत्तो बोको भनिन्छ (यद्यपि सामान्यतया यो महल परिसरको अधिक खण्ड हो)। यदि तपाईं पुरातन संस्कृति र इन्डोनेशियाको कला संग राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, Ratu Boko निस्सन्देह भ्रमण को लायक छ।
Ratu Boko को महल को इतिहास
9ौं शताब्दीको पहिलो आधा - आठौं को अन्तमा रत्तो बोकोको महल परिसरको जीवित विनाश। Ratu Boko एक मन्दिर , एक मठ, या पूर्ण मा महल बोलाउन सकिँदैन। स्थानीय इमारतहरूको उद्देश्य सन्दर्भमा शोधकर्ताहरूको विचार धेरै विचलित हुन्छन्। शायद मध्य मध्य मा एक किला यस स्थान मा बनाइयो थियो, यो भाग मा संरक्षित गरिएको थियो, ठूलो मात्रा मा यस क्षेत्र को उच्च भू-भाग को कारण। केही इतिहासकारहरू संस्करणमा झुन्डिएका छन् जुन पहिले त्यहाँ अस्पताल थियो।
तपाइँ कुन रोचक कुरा देख्न सक्नुहुन्छ?
Ratu Boko को Ruins "Kraton" भनिन्छ, जसको मतलब "पैलेस"। तपाईंले यहाँ जानुभएको आँखामा हड्ताल गर्ने पहिलो कुरा एक बेहद सुन्दर डबल प्रवेश द्वार हो, जसको लागि तीन-साढे सीढ़ी हुन्छ। यो यहाँ छ कि तपाईं मानिसहरूको सबैभन्दा ठूलो एकाग्रता देख्न सक्नुहुन्छ। ढोकाबाट वरिपरि शक्तिशाली पर्खालहरू र भित्रीहरू बाहिर छन्।
प्रवेश द्वार Ratu Boko पैलेस को एक योजना हो, जसको साथ यो जटिल भित्र भित्र नेविगेट गर्न सजिलो छ। भित्र भित्रै नै भर्खरै, ढोकाको बायाँतिर तपाईंले पाडल हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ मान्छे सूर्यसेट हेर्न को लागी भेला हुन्छन्। यस बिंदु बाट Prambanan को एक अद्भुत परिदृश्य र यसको मन्दिरहरु खुल्छ। इतिहासकारहरूको धारणाअनुसार, यो एक पूर्व रचनात्मकता हो। उनको पछि घाटी मा अवलोकन डेक संग गजबो सम्म पुग्छ।
Ratu Boko परिसर पर्खालहरु द्वारा घनिष्ठ धेरै संरचनाहरु हो, जो पहिलो स्थान मा एक रक्षात्मक समारोह को प्रदर्शन गरे। भित्र तपाईं आंशिक रूपमा यस दिनको संरक्षित देख्न सक्नुहुन्छ:
स्विमिंग पूल (वा रोमन स्नान);
सबै भवनहरु केवल पत्थर आधार र छत देखि, ऊपरी भाग काठ वा रेड देखि बनाइयो र त्यस समय पछि समाप्त भयो।
रैटोल गुफाहरु Ratu Boko को बाहिर मा स्थित छ। त्यहाँ उनीहरूको मात्र2हो - शीर्ष एक गुआन ल्यानङ भनिन्छ (वा पुरुषको गुफा), र तल्लो एक गुआ वाडोन (स्त्री) हो। सम्भवतः उनीहरूको ध्यानको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, पवित्र प्रतीक प्रवेश र माथिका पर्खालहरू भन्दा माथि संरक्षित गरिएको थियो (नरम लेनेस्टोनको कारण, अभिलेखहरूको रूपरेखा धुलो छ, र उनीहरूको अर्थ बुझ्न गाह्रो छ)।
रत्तो बोकोमा टिकटको लागत, परिसरका खण्डहरू भ्रमण गर्न थपमा, एक सानो रात्रि र एक पेय समावेश गर्दछ, जुन विशेष गरी सत्य हो जुन सूर्यसेट हेर्नको लागी बस्ने।
Ratu Boko पैलेस परिसर जोगजाकार्ता र सुरकार्ता को माध्यम ले कोल्टन को माध्यम ले जोडने को साथ, एक पर्वत (लगभग 200 मीटर ऊंचे) मा Prambanan देखि3किमी दूर स्थित छ। सार्वजनिक परिवहन प्रम्बनन मात्र चलाउँछ, त्यसपछि तपाई रेटु बोकोमा मोटरसाइकल टैक्सीमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ। प्रस्थानको स्थानमा निर्भर छ, तपाईं महल को एक मार्ग को चयन गर्न सक्नुहुन्छ:
Tugu Yogyakarta रेलवे स्टेशन बाट। Prambanana को दिशा मा, ट्रांसजाजा 1 ए बस मार्ग पछ्याउँछ। तपाईं मंगोक्यूमी को रोक मा जाने को आवश्यकता हो, त्यसपछि प्यासारमा मोटरसाइकल टैक्सी मा Pasaran Prambanan र यसलाई देखि जारी राखन को लागि। वा टैक्सी प्रयोग गर्नुहोस् वा कार भाडा दिनुहोस्। स्टेशनबाट तपाईंको गन्तव्यमा जानुहोस् 20 किमी (सडकमा 30 मिनेट)।
हवाईअड्डाबाट अडिस्जिजापोटो (आदिसटजिप्पा एयरपोर्ट)। हवाई अड्डाबाट रेटू बोकोसम्मको दूरी लगभग 8.4 किलोमिटर हुन्छ (टैक्सी वा किराए भाडामा 15 मिनेट)। सार्वजनिक परिवहनले Prambanan लाई मात्र पछ्याउँछ, त्यसपछि महान् ट्याक्सीमा प्राप्त गर्न आवश्यक महलमा।
बहुमुखी मा मशरूम संग मासु
लुटेको खाँसी - वयस्कहरूमा लक्षणहरू
कार्बनटेड पेय - हान वा लाभ?
गुर्देको उपचार - ट्याबलेट
रनहरू को व्याख्या
एक फर कलर संग कोट पहनने के साथ?
कसरी वजन गुमाउने?
आफ्नो हातले दर्पणको लागि फ्रेम
संगमरमर संग सामना
निलम्बनहरूसँग मोजाहरू कसरी फैलाउने?
चिया म्याच - राम्रो र खराब
कसरी सामाजिक सञ्जाल साधारण मान्छे को प्रचार गर्दछ - जीवन देखि 10 उदाहरणहरु
शिशुहरु मा क्लेबिसिला
Vanilla आवश्यक तेल - गुण र उपयोगको सुविधा जुन तपाईले थाहा भएन
डिलिवरी पछि आत्म-अवशोषणयोग्य सूत्र
पोर्क गुर्नी कसरी बनाउने?
जब तपाईं अल्ट्रासाउन्डमा भ्रूण अन्डा देख्नुहुन्छ?